Inona avy ireo morontsiraka tsara indrindra any Taiwan? | Vaovao momba ny dia
Fitsangatsanganana sy mpizahatany | | Toerana fitsangatsanganana, Fitsangatsanganana any Azia
Te handany fialan-tsasatra fahavaratra any Taiwan ve ianao? Ny fotoana tsara indrindra hankafizana ny morontsiraka taiwan Anelanelan'ny volana Mey sy Oktobra izy io. Tsara ny manamarika fa ny morontsirak'i Taiwan dia mankafy toetr'andro mafana sy mando any ambanin'ny tany, ary marihina fa manana fasika volamena sy fotsy tsara. Andao atomboka ny fitsidihana ao amin'ny Baishawan Beach, miorina amin'ny morontsiraka avaratry Taiwan, eo anelanelan'i Linshanbi sy Cape Fuguei. Izy io dia morontsiraka fasika fotsy tsara tarehy izay mivelatra mihoatra ny 1.000 metatra ny halavany. Manana rano manga madio sy madio koa izy io. Zava-dehibe ny manamarika fa ity morontsiraka ity, na dia eo aza ny lazany, dia tsy nahita karazana fampandrosoana fizahan-tany ka aza manantena hahita trano fisakafoanana.
Fotoana hitsidihana ny Fulong Beach, morontsiraka fasika volamena izay mipetraka amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny tanànan'i Fulong. Ho liana ianao hahafantatra fa morontsiraka tena tsara ho an'ny fitsangantsanganana rivotra sy lakana ity.
La Kenting Beach any atsimon'i Taiwan no misy azy. Morontsiraka fasika volamena mahafinaritra izy io, voahodidin'ny valan-javaboary 18.000 hektara. Eto amin'ity torapasika ity dia azonao atao ny manao fanazaran-tena amin'ny filomanosana, ny antsitrika, ny onja, ny fitsangantsanganana amin'ny rivotra, ny parasailing, ny ski ambony rano ary ny sambo.
Andao isika hankany amin'ny Nosy Jibei, miorina ao amin'ny Archipelago Penghu. Ao anatin'ilay nosy no ahitantsika morontsiraka fasika fotsy, heverina ho tsara indrindra any Azia. Tsy misy na inona na inona eto amin'ireto morontsiraka ireto, ankoatry ny elo vitsivitsy. Tsara ny manamarika fa toerana mety indrindra amin'ny fitsangatsanganana rano sy sambo akondro izy io.
Fampahalalana bebe kokoa: Hotely any Taiwan
Photo: Ranomasina tsara indrindra any Azia
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Inona avy ireo morontsiraka tsara indrindra any Taiwan?
Akanjo tsy mety maty an'ny Roma taloha